Kuwaan 19 + Astaamayaasha Anime-ga ah ee U-qalma ayaa u Qalma Deyn Dheer - Kale
19+ Ka Mid ah Astaamayaasha Anime ee aadka u hooseeya ee mudan Mudan
Jilayaasha anime ee hoos ka muuqda yihiin dhamaadka maalinta, shakhsi ahaan. Sida wax kasta oo loo tixgeliyo hoosta ka xariiqay.
Laakiin xitaa markaa, weli waxaa jira tiro ka mid ah jilayaasha la aqoonsan karo kuwaas oo u muuqda inay ku soo baxaan wada hadaladan. Halka kuwa kale aan la aqoon oo ku filan ama shaqada laga eryay.
Aynu ka wada hadalno labada dhinac ee usha iyo xitaa intaas in ka badan.
Waa tan liiska.
Astaamaha Anime ee hoos yimaada:
1. Khudaarta cagaaran (Dragon Ball Franchise)
Khudaarta waa mid ka mid ah jilayaashaas aan ka hadlayey. Hoos-u-dhac, aan la qiimeynin, iyo illaa iyo inta qorshaha anime mararka qaarkood, la ixtiraamo.
Xusuusnow markii ay Vegeta ku jirtay booskii ay ku burburin lahayd Dahabka Frieza, oo anime ay rooga uga jiiday cagihiisa hoostiisa?
Oo la sameeyey Goku geesiga?
Xitaa marka laga reebo waxyaabaha noocaas ah, Vegeta ayaa ka dheereysa Goku inta badan aagagga dabeecadda iyo shakhsiyadda.
Isagu waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan ee qof aabbe ah, lammaane, daacad u ah sida F, illaa dhulka oo aan dan ka lahayn isku dayga ka farxinta dadka kale ama dhunkashada dameerka.
Waa la dhaleeceyn lahaa haddii uu ku noolaan lahaa bulshada casriga ah (in ka sii badan USA) maxaa yeelay isagu kama uusan hadlin arintaas 't.
Khuseeya: 22 + Quotes Qudaarta 'Dragon Ball Z' Taageerayaasha Ayaa Mahadin Doona
2. Wendy Marvell (Sheeko-gaaban)
Wendy Marvell waa dabeecad aan hoos loo dhigin oo keliya guud ahaan, laakiin gaar ahaan Tail Sheeko.
Waxaan xiriir jacayl nacayb leh la leeyahay anime, in kasta oo ay ka mid tahay kuwa ugu cadcad. Laakiin markaad tixgeli adeegga marawaxadaha, Wendy xitaa waa la qadarin karaa.
Waxay ku bilaabataa sidii cunug xishood leh oo leh karti jilicsan. Oo waxay leedahay Karla oo ku qaylinaysa dhagteeda sababtoo ah sida ay u jilicsan tahay. Laakiin iyada danteeda gaarka ah.
Horumarka dabeecada ee aan ku aragno Wendy Marvell, iyo horumarkiisa tartiib tartiib ah waa mid la yaab leh. Waxay u socotaa iyada oo aan la ogaan.
Xitaa dabeecad aan muhiim ahayn, iyadu waa xusuus ku filan inay mid noqoto.
La xiriira: 34 Gabdhaha Anime Ee Ugu Xiisaha Badan Gabdhaha Anime Waligaa La Abuuray
3. Kyoko Kirigiri (Danganronpa)
Kyoko Kirigiri wuxuu ka yimid Danganronpa, oo laga soo qaatay ciyaarta fiidiyowga. Dhammaan anime-yada laga soo dheelitiray cayaaraha ma ahan inay noqdaan taxane ballaaran. In kasta oo anime la yaqaan.
Taasi waxay noqon kartaa sababta aysan ugu soo korin wada hadalka si aad u badan markay ka hadlayso weyn jilayaasha.
Kyoko Kirigiri waa mid ka mid ah jilayaasha ugu caqliga badan warshadaha. Maskaxdeeda ayaa ah hubkeeda, iyo dabeecad soo jiidasho leh.
Way fiicnaan laheyd haddii ay ka soo muuqan lahayd taxane anime ah sida Psycho Pass!
La xiriira: Gabdhahaan Anime ee 36-ka ah ee Timaha Casaanka ah ayaa kamid ah kuwa ugu quruxda badan ee abid la arko
Dabka waa dabeecad halyeeyo ah indhahayga, laakiin malaha qof kasta oo kale. Taageerayaasha Gurren Lagann ogow waxa aan ka hadlayo.
Haddii dhiirigelintu qof ahaan lahayd, waxay noqon lahayd Kamina. Hogaamiyayaal ahaan tusaale ahaan, waxay noqon karaan nacas, laakiin isagu wuxuu leeyahay qalbi weligiisna kama badnaado waxa uu aaminsan yahay.
Mustaqbalka Simone wuxuu ujiraa Kamina oo keliya, waana qayb ka mid ah sababta kooxda Gurren Lagann ay u jabto si xor ah oo ay u gaarto dusha sare.
Dabeecad aad u astaan ​​badan.
5. Akane Tsunemori (Cilmi-nafsi)
Akane Tsunemori ka socda 'Psycho Pass' waa mid ka mid ah jilayaasha haweenka ee ugu weyn warshadaha. Iyo jilayaasha anime guud ahaan.
Waxay dhigeysaa halyeeyo badan oo ceeb u ah sida wanaagsan ee ay u qortay, mana jirto adeeg faneed ama guji si ay u suurta geliso. Kaliya xirfad nadiif ah iyo diirad saar.
Akane ma aha nooc dagaal badan, laakiin waxay ku adkaysataa fikradeeda iyo fikradeeda. Oo aan ka baqayn inaad la wadaagto iyaga, xitaa marka la eego 'maamulka'.
Ka qaad sawirka iyada oo Psycho Pass uusan u shaqeyn karin anime ahaan.
La xiriira: Liis ka kooban 30 Anime cilmi-nafsiyeed oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso
6. Kirito (Seef Art Online)
Haa, waa sax. Kazuto Kirigaya. Ama sida ugu yaqaan isaga - Kirito.
SAO ma ahan anime ugu weyn, laakiin nacaybka waa la buunbuuniyey aaminaad dhaafsiisan. Iyo badiyaa clickbait.
Dhaleeceynta Kirito badanaa waxay la socotaa khadadka:
Laakiin taasi waa cherry soo qaadista iyo si ula kac ah wax uga saareysa macnaha maxaa yeelay way fududahay in caajis la noqdo.
Kirito wuxuu muujinayaa qoto dheer qiiro dhamaan SAO, wuxuuna leeyahay wajiyo dabeecaddiisa oo dadku taban yihiin ama iska indha tirayaan. Dabeecaddiisuna uma korayso qaabab jilicsan sida kuwa kale ee Shonen.
Hadaad ogtahay waad ogtahay. Iyo haddii aadan sameynin, ma ahaan doontid oo laga yaabee inaadan dhib ku qabin. Laakiin Kirito wuu istaahilaa wax yar amaah ka badan inta uu helo.
Subaru Natsuki waa dabeecad kale oo iga yaabisa sida ay taageerayaasha qaar ula dhaqmaan. Naxariis la’aanta ayaa layaab leh oo muujineysa.
Subaru ayaa inbadan soo maray naxdin iyo khibrado naxdin leh ka badan aadanaha, ama jilayaasha badankood sheegan karaan.
Waa shar. Waxaa lagu qasbay inuu ku wada noolaado waxaas oo dhan maxaa yeelay marwalba wuxuu ku soo noqdaa nolosha (ku noqoshada dhimashada).
Sawirka weyn, Subaru wuxuu ku koraa qaab muuqda. Mararka qaarna waa macquul sida uu u sawiray.
Wuu iska indhatiray inuu yahay dabeecad adag mararka qaarkood.
8. Koko Hekmatyar (Jormungand)
Hekmatyar oo dhan waa shakhsi jecel. Top 10 aniga ahaan.
Anime Jormungand wuxuu ku saabsan yahay ganacsatada hubka. Waxaana lagu sawiray darajo macquul ah.
Koko inaad tahay milyaneer, shaqaaleynta shaqaale ilaaliya, iyo inaad lacag ka sameysato ka ganacsiga hubka waxay kuu keeneysaa adduun aan waligiis waligiis si fiican u qaban.
Waxaad arki doontaa Koko amni darrada, cabsida, iyo ma ahan oo keliya waxa ay Mareykanku ugu yeeraan 'dameer xun' ama daqiiqado madaxeed.
Waxay ag istaagtaa Revy Rebecca iyada oo ah dabeecad tayo leh, laakiin aan la mahadin inta badan.
9. Fuulo (Qaddar Eber ah)
Fuula laga bilaabo Fate Zero waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu fiican anime ee jilayaasha adag. Wuxuu ka dhigayaa anime aad u iftiimaya, ma shaqeyn laheyn isaga la'aantiis.
Rider wuxuu leeyahay qiimeyn iyo mabaadi'da ay yihiin daqiiqado la baran karo, iyo dareen kaftan ah qofna ma diidi karo ama hoos uma dhigi karo.
Si dhab ah oo fudud u socda, laakiin dabeecad dhab ah oo leh hammi ah inuu ku noolaado noloshiisa ugu fiican, oo aan marnaba ka gaabin waxa muhiimka ah.
Xitaa haddii taasi macnaheedu tahay qalad.
Mugen waa G. Taasi runtii waa wax walba oo loo baahan yahay in la sheego.
Wuxuu si fiican ugu matalay Samurai Champloo waana uu ka duwan yahay in uusan istaagin.
Ku xoq cidhifyada darafyadiisa darteed, cidna kama qaado sh. Xitaa haddii taasi macnaheedu tahay in loo dhinto diidmada rukuucda.
Haddii Mugen uu ahaa xigasho, waxay noqon lahayd mid ka timid Tupac: 'Waxaan jeclaan lahaa inaan u dhinto sida nin, Intaan u noolaado sida fuleyga.'
Khuseeya: 19 Astaamayaasha Anime ee ugu Dabacsan
11. Ruiko Saten ( A Railgun Saynis Gaar ah )
Ruiko Saten waa dabeecad aan awood gaar ah ku laheyn Railgun. Iyada oo ka dhigaysa mid 'caadi ah' oo umuuqata mid aan danaynayn.
Laakiin run maahan.
Cunsurkani wuxuu Ruiko ka dhigayaa mid la mid ah Railgun. Gaar ahaan qaansada 'heerka sare' ee taxanaha. Adiga ayaa isku gelin kara kabaheeda.
Iyada oo leh xiiso badan iyo cabsi la'aan markii la tiriyo, iyada ayaa ah sababta aan uga helno qaybo adag qaar ka mid ah Railgun guud ahaan. Waxayna mudan tahay amaah ka badan tii ay siisay.
12. Gray Fullbuster (Dabiiciga)
Grey Fullbuster waa ninka aamusan. Kan waaye dib loo dhigay, la qaboojiyey, oo aanu sheegin wax ka badan inta uu u baahan yahay.
Waxaan la xiriiraa taas.
Ciyaarta jaceylka, isagaa la mid ah. Ma aha mid aad u dhalaalaya oo kaliya ayaa eryan doonta haddii qalbigiisu ku jiro, halkii dadku ka farxin lahaa.
Iyada oo leh awooda barafka sida sixirka sameeyaha, iyo ujeedo nololeed oo dhiirrigelin ka leh geeri naxdin leh, Grey wuxuu macno u leeyahay Fail Tail.
Ka baxsan bulshada Fairy Tail bulshada kuma uusan xusin wax ka badan intii ay ahayd inuu sheego, waana sababta uu aniga iigu hoosjiray.
Safarkiisa ayaa iska hadlaya.
Saitama waa caan. Xitaa waxaad waydiin kartaa sababta uu ugu xusay liiskan. Laakiin kama hadlayo awoodaha ama awoodaha, shakhsiyad iyo qoto dheer
Wuxuu lumiyaa timihiisa kadib markuu u tababbaray sida waalan, waxaana u waxyooday waqti noloshiisa ka mid ah oo uu ahaa ganacsade murugo badan.
Ka dib markii uu lumay timahiisa oo dhan oo uu noqday ninka ugu xoogan adduunka, xiisaha guusha ayaa dhinta. Oo isagu wuxuu noqdaa waxoogaa niyad jab ah oo aan la buuxin.
Dhinacyada dabeecadda Saitama (inkasta oo anime-ku yahay qosol) si fiican ayaa loo qoray. Aniguna waxaan sidaa u leeyahay qof aan ahayn taageere OPM ugu weyn.
Hoos kadhegayso xudunta.
14. Sousuke Sagara (argagax birta oo buuxa)
Sousuke Sagara waa dabeecadda ugu weyn ee Cabsida Birta Buuxda. Taxane anime ah oo asal ahaan ka bilaabmay Animation Kyoto sanadihii 2000's.
Cabsida Birta Buuxda waa mid ka mid ah waxyaabaha yar yar ee 'Mecha anime' wali wali ka sii baxaya xilliyadii cusbaa tan iyo tan.
Sousuke wuxuu ahaa askari caruur ah wuxuuna leeyahay khibrad 10 sano ah. Waa kaliya 17-18 sano jir. Aqoontiisu waa dilaa.
Ma jiro xilli kale oo aan ahayn Guul aan la arki karin taasna waxay ku tusinaysaa shahaado duruuf ah. Laakiin dabeecaddiisu kama qabsanaynin aragtida guud.
La xiriira: 9 Muuqaalada Milatariga ee Milatariga ah ee kaa Heli Doona Nooca
15. Kusuo Saiki (Noloshii musiibada ahayd ee Saiki K)
Kusuo Saiki waa dabeecad kale oo aan ugu jeclahay shaqsiyan. Siyaabo badan ayaa loo sheegi karaa.
Waa maskax ka awood badan oo raba in keligiis loo daayo si uu ugu raaxeysto noloshiisa si nabad ah. Laakiin taasi waligeed ma dhacayso.
Si la mid ah Saitama, maahan awoodaha iyo awoodaha waxa Kusuo ka dhigaya mid ifaya, ee waa isaga sheeko, wadahadalkiisa gudaha, iyo jihada anime u socdo.
Isagu uma caan aha sida qof sida Gintama oo kale ah, laakiin wuxuu u qalmaa sida ugu badan ee lagu ammaano.
16. Holo The Wolf Caqli badan (Spice & Wolf)
Holo The Wolf Caqli badan waa qeyb kamid ah taxanahan khiyaaliga ah. Iyadu waa maskaxda bandhigga. Ama 'xigmad' loo baahan yahay markay ganacsi tahay.
Iyadu waa caqli badan laakiin ma cocky. Caqli badan laakiin aan isla weyneyn ama aan is tusin. Waana qof indheer garad ah oo fakara intaanay ficil samayn.
Si fudud mid ka mid ah halyeeyada haweenka ugu fiican, iyo maalmahan, dabeecad hoose oo aan wax badan laga maqal.
La xiriira: 10ka Cashar ee ugu badan ee waxbarasho waxaad ku baran kartaa Daawashada Anime
17. Laxus Dreyar (Sheeko-gaaban)
Laxus Dreyar waxay u egtahay inay soo muuqato markii waxyaabo waaweyn ay ku dhacaan Fairy Tail. Markaa waa wax dabiici ah oo isaga lagu xasuusto iyo dabeecad FT ku habboon.
Taasi waxay tiri, waxaa jira waqtiyo uusan ka helin dhammaan sumcadda uu u qalmo, oo la mid ah Vegeta siyaabaha qaarkood.
Horumarka dabeecadda Laxus iyo horumarkiisu waa xiddigle wuxuuna ku bilaabmaa si weyn. Isaguna waa mid ka mid ah jilayaasha ugu labiska wanaagsan waxaa jira.
18. Mikoto Misaka (A Railgun Scientific Scientific)
Mikoto Misaka waa xiddig halyeeyada haweenka oo aan helin dhalaal badan sida kuwa kale. Wax caadi ah oo leh astaamo dumar gaar ah oo ku yaal Shonen iyo wixii la mid ah.
Sida Railgun ee dugsiga dhexe ee Tokiwadai, iyadu way ka khushuucsan tahay waxayna leedahay is-hoosaysiin ka badan sidii la filayay.
Dhulka hoos iyo daacad.
Waxay leedahay dareen xoogan oo masuuliyadeed laakiin waxay caado u leedahay inay wax uun iskula hadasho. Adduunkana garbaheeda u qaadanaya.
Damac badan oo iskiis loo wado. Oo waxay leedahay qaar ka mid ah muuqaalada ugu fiican ficil anime. Wax badan oo la mid ah Misaka.
19. Michiko Malandro (Michiko To Hatchin)
Michiko Malandro waxay leedahay dhaqdhaqaaqyo la mid ah Revy Rebecca iyo Kyoko Hekmatyar. Laakiin iyadu way ka duwan tahay oo waxay ku taagan tahay haadkeeda.
Anime-kan, iyo sidoo kale Michiko waxay meteleysaa dadka reer Brazil ee Madow, Latino’s, iyo dhaqanka madow guud. Si cadaalad ah ayaa looga soo reebay.
Michiko Malandro waa mid qallafsan hareeraha geesaha sida Mugen, taasina waxay ku hadlaysaa taariikhdeeda.
Waxay u qalantaa amaan dheeraad ah nooca ficil ee anime.
Astaamaha Kale ee Anime:
Shirayuki (Baraf cad oo leh timo cas).
Jellal Fernandes (Fairy Tail).
Riza Hawkeye (Fullmetal Alchemist).
Myne (Kordhinta Bookworm).
Ram (Re: Zero).
Levy Mcgarden (Fairy Tail).
Shouko (Nolosha Sonkorta Farxada leh).
Allen Walker (D. Grey Man).
Kyoko Jiro (My Hero Academia).
Maki Zenin (Jujutsu Kaisen).
taxanaha anime ee ugu fiican waqtiga oo dhan
14 + Maraakiibta Anime ee aan waligood dhoofin doonin (Khasaare)
15 + Astaamaha Anime ee Toosan Otaku's & Weebs
anime majaajilada ugu fiican waqtiga oo dhan